DF oo ogolaatay in bannaan-baxa Sabtiga uu ka dhaco Daljirka | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda uu waqtigu ka dhamaaday ayaa sheegatay in ay Midowga musharixiinta u golaatay in ay bannaan-baxooda ku qabsadaan Tallada Daljirka Dahsoon.
MUQDISHO, Soomaaliya - War Saxaafadeed ka soo baxay Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Dowladdu ay Golaha Midowga Mushariinta u ogolaatay in ay bannaan-baxooda ku qabsadaan Taallada Daljirka Dahsoon.
“Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyada oo tixgelinaysa geeddi socodka dimuqraadiyada, qabsoomidda doorashooyinka qaranka iyo ilaalinta heshiisyadii mucaaradka waxa ay u ogolaatay mucaaradka codsigoodii ahaa in mudaharaadka ay ku qabsadaan fagaaraha Daljirka Dahsoon”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Xukuumadda.
Sida Keydmedia Online ogaatay, Guddigii qaban qaabada Mudaharaadka oo maanta shir ku yeeshay Hotelka Decale oo ku yaalla Garoonka Diyaaradaha ee Adan Cadde, ayaa isku fahmi waayay qodabkaan kadib markii xubnaha ka socday dhanka dowladda ay dalbadeen in dibad-baxa laga badalo Daljirka, isla markaasna ay Xubnaha Mucaaradku ha hor yimaadeen codsigaas.
Sida lagu sheegay War Saxaafadeedka, Xukuumadda xil gaarsiinta ayaa dalbatay in mucaaradka ay mudaharaadkooda ku qabsadaan Eng Yariisow Stadiyoom hayeeshee ay Midowga Musharixiintu diideen kuna adkeysteen Taallada Daljirka Dahsoon.
Sii-hayaha Xilka Ra’iisul wasaaraha Rooble ayaa dhawaan heshiis la galay Mucaaradka, waxaana la filayaa in ay kulankoodii Saddexaad birri ku yeeshaan Magaalada Muqdhisho.